::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather म्यादी प्रहरीमा जागिर खुल्यो, ९८ हजारको माग:: Rojgar Manch ::
म्यादी प्रहरीमा जागिर खुल्यो, ९८ हजारको माग
मंगलवार, २०७४ आश्विन २४ गते २२:१०
मंसिर १० र २१ मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सरकारले ९८ हजार ३ सय ६८ युवाका लागि म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलाएको छ। आज असोज २४ देखि असोज ३० गतेसम्म दरखास्त दिन पाइनेगरी नेपाल प्रहरीले आवेदन खुलाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रहरी परिसरहरु र उपत्यकाबाहिर सम्पूर्ण जिल्ला प्रहरी कार्यालमा दरखास्त बुझाउन सकिने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। तर नवलपरासी र रुकुमको हकमा भने पहिलेकै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दरखास्त बुझाउनुपर्ने छ ।
दरखास्त फारम दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पुरा भई ५४ ननाघेका युवाहरुले आवेदन दिन सक्ने छन्। साधारण लेखपढ गर्न जान्ने जोकोही नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् । यद्यपी सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
असोज ३० गतेसम्म आवेदन संकलन भएपछि आवेदन दिएकोले कात्तिक १ गते आवेदन बुझाएको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै कात्तिक ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म छनौट प्रारम्भ हुनेछ । १० गते छनौट भएकाहरुको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । छनौट भएकालाई कात्तिक १२ देखि २४ गतेसम्म प्रशिक्षण दिइने बताइएको छ । प्रहरी जवानले पाएसरहको तलव, भत्ता र सुविधा म्यादी प्रहरीले पाउने छन् ।
म्यादी प्रहरीले ५५ दिन खटिएबापत आधारभुत तलब १७ हजार २ सय ३० रुपैयाँका दरले राशन, पारिश्रमिक र स्थानीय भत्ता पाउने छन् । त्यस्तै निर्वाचनको दिन सात दिनको लागि प्रति दिन २५० रुपैयाँका दरले विशेष भत्ता र २५० रुपैयाँ नै खाजा खर्च पाउने छन् । म्यादीमा छनौट भएकाले ४ हजार पोसाक भत्ता पाउने छन् भने बाटो खर्च स्वरुप एक हजार रुपैयाँ पनि उनीहरुले पाउने छन् ।
1. मलेसियन दूतावास भन्छ : ओएससी र भिएलएन बन्द नगर्नु
2. प्रवद्र्धन बोर्डमा प्रमुख नहुँदा कामकारवाही प्रभावित
3. रिक्त राजदूत नियुक्तको तयारीमा सरकार, मलेसियामा प्राडा संग्रौलाको नाम चर्चामा
4. मलेसिया जाने कामदार अन्यौलमा, व्यवसायीले बन्द गरे बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परिक्षण
5. सिण्डिकेट खारेज भएकै हो ? मन्त्री विष्ट के भन्छन (भिडियोसहित)
6. सातै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्र खुल्ने
7. विदेशको मागपत्र प्रमाणीकरण अब नेपाली नियोगको मात्र मान्य हुने
8. त्रिभुवन विमानस्थलमा शव बुझ्ने छुट्टै कक्ष स्थापना
9. साउदी जेलमा रहेका प्रेमबहादुरलाई छुटाउन प्रधानमन्त्रीद्वारा ३० लाख हस्तान्तरण
10. वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा सिन्को नभाँचिएको वर्ष
11. वैदेशिक रोजगारीमा ठगिनेले न्याय पाउनै मुस्किल
12. कोरियाबाट फर्किएकाहरूलार्इ पुन : अवसर, तीनहजारलाई लगिने
13. अमेरिकाबाट ९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउने तयारी
14. स्वरोजगार कोषले दिने रकममा बृद्धि, पाँच लाख पु¥याइदै
15. विदेशको जेलमा रहेका नेपालीलाई सरकारले कानूनी सेवा दिने
16. वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौ कार्यालयबाट २९ जना विचौलिया पक्राउ
17. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको विषयमा संघ र प्रदेशबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड
18. ‘फ्री भिषा नो टिकट’ र एक महिनाको तलब सेवा शुल्क माग्दै संघ
19. कतारले कामदारको क्षतिपूर्ति दिने
20. कोरियन भाषा परीक्षामा ८२ हजार बढिको आवेदन
21. यूएई दूतावासमा अव प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्नु नपर्ने
22. श्रम मन्त्री विष्टलाई झापाका मेनपावर एजेण्टको ज्ञापनपत्र
23. कोरिया जानेको आवेदन खुल्यो, वैंकमा लामो लाइन
24. श्रम मन्त्री विष्टको चेतावनी –‘डाइनोसर हुनु पर्ला’
25. १६ हजार युवालाई सीपमूलक तालीम दिइने
Results 555: You are at page 1 of 23